League 1: garaacday Nantes, PSG weli ma dhicin - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Kooxda 1: waa laga adkaaday Nantes, PSG weli ma dhamaan karto
Isku day saddexaad PSG, hore u dulleeyay ee Lille (5-1) Sunday oo ka gaabsaday maqnaanshaha badan, dhanka ah Nantes badiyay (3-2) ciyaarta dambe oo Arbacadii ah ee maalinta 28e wali la la'yahay fursad ay ku dambeyntii rasmiyaynayso ay horyaalka Faransiiska.
Nasiib wanaag Paris ayaa 17 hogaanka horyaalka dhibcood sababtoo ah intii toban maalmood ah, ogre ee 1 League waxa uu noqday nooc ka mid ah QEF in mar dambe cabsi qof. Xitaa Nantes 14e kala horeynta, wuxuu ahaa awoodaan in ay bixiyaan isagoo uga mahadcelinaya labo uu ka Carlos Diego (22e, 52e) iyo gool ka Majeed Waris (44e).
Haddii ay maya ku filan in ay Stade Pierre-Mauroy Sunday saaxiibadiisa Presnel Kimpembe, oo ahaa sirkaalkii ka dambeysa habeenkii ah, ay ahaayeen waqtigan daruuri adkaan ee La Beaujoire si loo ansixiyo ay horyaalka 8e.
Iyada oo ay taasi soo gaartay 3e xilli ciyaareedkan horyaalka, Paris weli yeelan doonaan in ay sugto dhowr maalmood ilaa kulanka Monaco ee Parc des Princes habeenkii Axada (21h00) waa in uu ku guuleysto in ugu danbeyn soo gabagabeyn haddii Lille ha ku garaacday Toulouse hore galabtii. Iyo in aan "samatabbixin" ayuu cajiib ah by Eric-Maxim Choup-Moting ka dhanka ah Strasbourg (2-2) waxaa jira toban maalmood, arrinta laheyd ayaa la duubnaadaan ...
Irony ee jadwalka, hoos u dhac ku yimid Nantes ayaa ka dhacay horaantii ugu dambeysay ee quarterfinals ee C1: Manchester City-Tottenham iyo Porto-Liverpool. Maalin ka dib Ajax Amsterdam oo ku yaala garoonka kubadda cagta ee Juventus Cristiano Ronaldo, inkastoo miisaaniyad shan jeer ka hooseeysay kooxda Paris.
Ka soo horjeeda kooxda PSG oo dib loo habeynayo, gabi ahaanba ciyaarta ka soo horjeeda koox ka ciyaareysa dayactirka ...
- Mbappé iyo madaxda ka maqan -
Tababaraha PSG Thomas Tuchel, dacday by xadka ay shaqaale iyo faafa ee dhaawacyada ay ku dhaceen kooxda tan iyo bilowgii xisbiga 2e xilli ciyaareedkan, ayaa lagu qasbay inuu garoonka kow iyo toban tijaabo oo ay ku jiraan saddex dhalinyarada tababarka.
Horey waxaa laga mamnuucay Neymar, Cavani iyo Di Maria dhowr asbuuc, farsamadaa Jarmalka ayaa Thiago Silva iyo Thomas Meunier ka soo horjeeda Lille, halka Marco Verratti iyo Juan Bernat la ganaaxay.
Xitaa Kylian Mbappe, oo ahaa gooldhaliye dabiici ah ayaa ka badbaaday qalado jilicsan, ugu dambayntii waa inuu maqnaadaa.
Laakiin xataa Choupo-Moting mana Moussa Diaby N'Kunku, Diaby, ama Paredes, ayaa ku noolaa doonaa inuu iskululeeyo Quluubta boqolaal taageerayaasha ee Paris garoonka, iyadoo weli hogaaminaya dab wax baabbi'inayay Our Lady of Paris Isniintii.
Maqnaanshaha ah "shark" ee meelaha Kylian Mbappé, Dani Alves, aka ah "kalluunka" qolka labiska sidii uu isaga qudhiisu sheegay in wareysi uu siiyay AFP, kuwaas oo u maleeyay inuu jidka u furay si ay u dabaaldega ah kubad dheer falna sanyahay hoydeen dariishaddii khiyaaneeyey (1-0, 18e).
Laakiin PSG ayaan weli wax dhibaato ah ka qabin dhibaatooyinkeeda iyagoo qeyb ka ah goolka cusub ee madaxa loogu dhigay Diego Carlos (22e).
Markaas fekeri karin ka dhacay qund Thilo Kehrer, mar hore eed marka "remontada" Manchester United inta lagu jiro 8e soo laabtay final C1, burburtay ka hor qeybtii hore!
Si buuxda u heysatay xafiiltanka ka by Kalifa Coulibaly on kubada ah buuga xusuus dhow dhaawacyo ah, daafaca reer Jarmal tagay Nantais keeni goolkii labaad u dhaliyay Waris (2-1, 44e).
Markii dib loo soo celiyay qolka santuuqa, kacdoonkii Parisian ma dhicin. Waxaa sii xumaanaya, Diego Carlos ayaa sidoo kale nasiib wanaag siiyey Nantes (3-1, 52e) ...
Faransiiska ayaa ku dhawaaday daqiiqado yar ka dib markii Paredes, gawaaridii jiilaalka oo gebi ahaanba ka careysnaa, kubada siiyay Coulibaly, halka Buffon uusan ku jirin baqashiisa (57e). Hadafka goolka si qoto dheer looga fogaado ...
Yareynta dhibcaha dhalinyarada yar yar ee Metehan Guclu (88e) dhamaadka ciyaarta ma bedeli doonto. Rennes, cadowga cadowga ee Nantais, ayaa u mahadcelin kara deriskiisa: kahor inta uusan ku guuleysan Coupe de France, 27 April, waxa uu ahaa mid liitay fariisimaha Paris ...
Halkan waxaa laga soo xigtey: http://www.rfi.fr/depeche/ligue-1-battu-nantes-le-psg-arrive- weli-aan-dhow
Libaaxyada aan la dabooli Karin: Le Coq Sportif qalab cusub oo cusub - Cameroon